सुन्नुभएको छ यो विनायकको नाम ? – MySansar
सुन्नुभएको छ यो विनायकको नाम ?
Posted on June 3, 2013 June 1, 2013 by Salokya
भगवान गणेशको अर्को नाम विनायक हो। काठमाडौँका चार कुनामा रहेका चार विनायक प्रख्यात छन्- सूर्य विनायक, जल विनायक, चन्द्र विनायक र अशोक विनायक। त्यसबाहेक अरु विभिन्न विनायकका नाम पनि प्रचलित छन् जस्तै सिद्धि विनायक। गोसाँइकुण्ड जाने बाटोमा रहेको लौरी विनायक पनि प्रख्यात नै छ। तर तपाईँले सुन्नुभएको छ दही विनायक ? हजुर, रहेछ यस्तो विनायक पनि।
कहाँ छ त यस्तो दही विनायक ?
एक दिन भक्तपुरमा घुम्न गएका थियौँ। भक्तपुर गएपछि त्यहाँको प्रख्यात दही जुजुधौ नकिनी कहाँ भयो र ! दरबार स्क्वायरबाट दही किन्ने ठाउँ खोज्दै गर्दा देखेँ यो दही विनायक। अचम्म लाग्यो। अहिलेसम्म यस्तो दही विनायकको नाम सुनेको थिइनँ।
10 thoughts on “सुन्नुभएको छ यो विनायकको नाम ?”
भक्तपुर को रहेछ तर कहिले हेक्का भएन . थाहा पाउन पाएँ धेरै धेरै धन्यवाद
कमलादी को “कमल विनायक” पनि प्रसिद्ध छ !!!
बाच्नु मात्रै पर्छ के के देख्नु पर्छ भनेको यही हो.
गोसाँइकुण्ड जाने बाटोमा रहेको लौरी विनायक पनि प्रख्यात नै छ भनेर लेख्ने लाई लौरीबिना उकालो नाम हो भन्ने थाहा रहेनछ कि के हो लौरो बिना उकालो चढ्न गार्हो हुने भएको ले त्यो नाम राखेको भन्ने नबुझेर जे मन लग्यो तेही लेख्ने ? अचम्म छ यार
हावा कमेन्ट गर्ने यार !!!! विनायक भनेको गणेश भगवान को नाम हो /// लौरी बिना चढ्न नमिल्ने उकालो भर गदेश्लाई लौरी विनायक भन्या हो र जे पायो तेही //
अनधविशवासले घेरेको मुलुक!
prabhat shrestha says:
बिनायेक को खास अर्थ के रहेछ ?
भन्न खोजेको त सिद्धि नै हो जस्तो लाग्छ ..तर बाक्य लाइ ब्रेक गरेर लेखि दियो जस्तो लाग्छ. कि त्यो गणेस जी पनि भक्तपुरे परेर लड्डु को सट्टा जु जु धौ रुचाउने भएको ले त्यो भक्तपुरे गणेस लाइ दहि बिनायेक भनेको हो कि :)..होला होला
दहि विनायक!!! माथिको चित्र हेर्दा यो त् दहि बेच्ने पसल जस्तो देखियो/ माथि लेखमा भक्तपुरको दहि भन्नुको सट्टा “जुजुधौ” नै भन्नु भयको भय राम्रो हुने थियो/ आफ्नो त् बालककाल भक्तपुरमै तेही “जुजुधौ” खायरै बितेको हुनाले अहिले पनि कहिंको दहि पनि “जुजुधौ” जत्तिको मिठो लाग्दैन/ “दहि विनायक” ले सबै दहि बनाउनेहरुलाई जुजुधौ जत्तिकै मिठो दहि बनाउन सक्ने बनाउन/
दहि बेच्ने जुक्ति सहि लग्यो . सोनी कर्पोरेशनका मालिक अकियो मोरैताको जीवनी पड्दा उनले भनेका थीए ब्रान्ड नेम भनेको क्यची हुनु पर्छ रे यो पनि तेस्तै लग्यो …..